Nahita an'ity pejy ity ianao satria ny Vizio TV na ny tadinao dia misy olana amin'ny fifampiresahana miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra hafa, ao anatin'izany ny mpanara-maso ny rafitra fanaovan-jiro bias MediaLight.
Manokana, ny volume midina sy ny bokotra 20% ho an'ny MediaLight dia mety hanelingelina. Ny fampihenana ny feony dia mety hanadino ny jironao, na ny fanamaivanana ny jironao dia afaka manitsy ny volanao. Mety hirehitra ihany koa ny jiro indraindray.
Tsy nametraka olana ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa izany satria, tsy toa ny ankamaroan'ny fahita fahitalavitra, i Vizio dia manana safidy eo ambanin'ny toe-tsain'ireo mpampiasa antsoina hoe "Vonoy ny USB amin'ny fahitalavitra."
Raha misafidy an'ity maody ity ianao, dia hirehitra sy ho faty ny jiro amin'ny fahitalavitra Vizio nefa tsy mila mampiasa ny fanaraha-maso lavitra ny jiro.
Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra ny iray amin'ireo safidy roa izahay:
1) Apetraho ao ambadiky ny fahitalavitra ny mpandray MediaLight ka ivelan'ny tsipika fahitan'ny lavitra Vizio. Azonao atao ihany ny mampiasa ny mividy lavitra MediaLight mivezivezy manakaiky kokoa na aorian'ny televiziona miaraka amin'ny lavitra, na eo aza ny MediaLight dia napetraka ho 10% amin'ny famirapiratana faran'izay betsaka amin'ny fampisehoana, dia tsy tokony mila mametraka azy intsony ianao.
2) Sarony amin'ny foil aluminium ny mpandray raha vantany vao napetrakao ny haavon'ny famirapiratana. Ny herinaratra avy amin'ny fahitalavitra sy ny vizio Vizio anao dia tsy hampisy jiro.
Raha ny bikan'ny feonao dia tsy noho ny fahitalavitra Vizio (na raha mila mampiasa ny lavitra ianao noho ny antony tsy noheverina etsy ambony), dia manome dimmer hafa azonao ampiasaina amin'ny MediaLight ianao. Bebe kokoa noho ny lavitra mahazatra.
Any Etazonia dia afaka mahazo remote alternatera maimaimpoana sy manjavozavo ianao amin'ny filaharanao MediaLight. Mangataha fotsiny amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany na manorata naoty mandritra ny fizahana. Raha mangataka iray ianao rehefa avy nahazo ny kaomandinao, dia mbola maimaim-poana izany saingy mandoa fandefasana ianao ($ 3.50 eo ho eo ho an'ny mailaky ny kilasy voalohany).
Raha ho an'ny baiko taloha ity dia ianao dia tsy maintsy ampidiro ao anaty fangatahanao ny ID kaomandy mety.
Ho an'ireo any ivelan'i Etazonia dia misy sarany fandefasana $ 14 raha toa ka manafatra lavitra maimaimpoana fotsiny ianao. (Antsika ity vidin'ny ho an'ny mail iraisam-pirenena kilasy voalohany. Na eo aza izany dia tsy mivarotra fahitalavitra maro any ivelan'i Etazonia i Vizio, ka tsy dia hitantsika matetika io ivelan'i Etazonia).